Zvinokosha zvakadini domain age SEO?
Pane here kuwirirana kwechokwadi kune imwe nzvimbo yechizvarwa uye SEO kubudirira muGoogle kusimudzirwa? Uyu mubvunzo pamusoro peKutsvaga Kugadzirisa Maitiro uye kuti unogona sei kuwirirana nezuva rekuregwa kwechirongwa ndechimwe chinhu chinokosha, chinowanzokurukurwa neyanzvi webmasters, uyewo vazhinji vanoita bhizinesi rebhizimusi.
Kazhinji kacho, mhizha yegurus iri kugumisa kuti nguva yechirongwa nemigumisiro ye SEO nenzira imwe neimwe inobata ruoko. Nekusavapo, maonero avo mazvino pamusoro pekukuru kwemazana ekutonga kwenguva ye SEO, zvakasiyana zvakasiyana, kunyange zvakadaro vachiri kugadzirisa pfungwa nenzira yavo pachavo:
mazita ezera remakore haana simba pane SEO, uye saka paGoogle
domain doming inongova chinhu chimwe chete pakati pemakumi ezviuru zvehumwe humwe unhu hwakabatanidzwa kuhutano hwakanaka hweGoogle
ruzivo rwezera runoita basa rinokosha rokutora nzvimbo yakakwirira muSERPs
Uyezve, pano pane zvikamu zviviri zvinokosha mushure mekukurukurirana kwezvino pamusoro pesimba remakore uye SEO:
achifunga manyorerwo anoshandiswa kuti spammers kuisa mazita matsva mubhuku rekunyora uye nekukurumidza kuwaisa, mazita matsva anyoreswa anowanzoshandiswa newebsite ye spamming
ne reverse logic, zita rekare rezita rinoreva kuti webhusaiti yakanaka uye yakakodzera, sezvakanaka -vakasimbiswa vanoramba vachishandisa mazita akafanana kwemakore
Zvakanaka, tinoona zvakawanda zvekusatenda pano. Asi chinhu chimwe chete ndinogona kukuudza chokwadi - zera renharaunda inokosha kana zvichifungidzirwa neavo vanezvo. Ndinoreva kuti kana muridzi wemunda akagara kwenguva yakareba uye yakachena muzvinyorwa zveGoogle, hazvigoni kukuunza zvakashata, kana iwe ukasarudza kutenga ikozvino uye yakashandiswa. Kubva kune rumwe rutivi, zvisinei, pane dzakawanda "zvakaipa" domains, zvichida dzakanzi dzakave spam kana kunyange kutongerwa neGoogle dzimwe nguva.
Kudzivirira nzira yakashata yezviitiko zvisingaitiki, nyanzvi dzinokurudzira kufunga nezvemashoko aya chete anotengeswa, izvo zvakawanikwa nehuwandu hwemashoko. Hongu, avo vanokanganisa vanogonawo kunge vane kuchengetedzwa kwevamwe, semuenzaniso na Whois queries, ndinofanira kubvuma. Kunyange zvakadaro, izvozvo zvingadai zvichiunza kushushikana kuzhinji.
Nenzira iyo, ndinokurudzira kuva nekaviri-chenguva yezera rechirwere uye nhoroondo yayo isati yaita chibvumirano. Uye kune zvakawanda zvakakosha zvinogadziriswa zvinowanikwa mukusununguka kwekutsvaga kutarisa kana zita romumwe munhu rakanyoreswa. Somuenzaniso, iwe unogona kuedza Netcraft tool kuti uone kana domain iri yakanyorerwa neGoogle kutamba bots kwekutanga. Kuita kudaro, unogona kuziva mazita echivimbiso anonyanya kuvhiringidzwa sevakavimbika, sezvavakagadzirirwa nokuda kwehupenyu hwavo hunogara kwenguva refu, uye saka vakatevedzwa zvakanaka muSERPs.
Cherechedza, zvisinei, mazano angu haatauri zvachose kuti zita rezita rechangobva kugadziriswa richave risina kukanganisa kukwikwisana nevanokurwisana vakwegura, saka kuva nechido chakakosha kukwira kumusoro kwezvawanikwa. "Vakuru ndiro zita rezita ramunayo, iyo yakakwirira iyo iwe uchawana" - iyo haigoni kuva 100% inoshanda chero zvakadaro. Ingochengetedza mupfungwa, kuti nguva yebasa rakanaka inobata simba rechiremera, tinofanira kubvuma. Mushure mezvose, zvisinei, dhinhe yezera ne SEO inogona kuendesa mberi webhusaiti yekutarisa nenzira yavo pachayo, zvose zvakanaka uye zvakashata Source .